NamasteNEPALI.com: अझ कठोर बन्दै ओली, मन्त्रीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी, कस्ले कुन मन्त्रालय पाए ?
अझ कठोर बन्दै ओली, मन्त्रीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी, कस्ले कुन मन्त्रालय पाए ?
काठमाडौँ, २९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई थप मन्त्रालयको जिम्मा सुम्पनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्दै मन्त्रीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी सुम्पेको अवगत गराउनुभएको हो । ‘मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा ८ जना मन्त्रीहरुले राजिनामा दिई रिक्त हुन आएकोले नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम थप कार्यभार दिइएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको छ । यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छादारलाई बन तथा भुसंरक्षणको जिम्मेवारी थपिएको छ । उपप्रधानमन्त्री भीम रावललाई रक्षासँगै गृृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । श्रममन्त्री दिपक बोहोरालाई आपूर्ती मन्त्रालय, कानुन मन्त्री अग्निप्रसाद खरेललाई शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्री रामकुमार सुब्बालाई सिंचाई मन्त्रालय र पशु विकास मन्त्री शान्ता मानवीलाई कृषि मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो ।